Sein Lyan - စိ န် လျှံ: အပြောင်းအလဲများစွာနဲ့ ကျနော်
အစီအစဉ်မချပဲကို အစီအစဉ်တကျဖြစ်နေတာ ဘ၀လား ..း)
Congratulations little bro!!!! I am relieved to know that you are now settled and have new opportunities in your life. Bon courage!!!!
Merci Beaucoup Mon Petit Avatar !
Merci beaucoup pour votre courage!
Master In Social Work ဆိုတာ ကျွန်တော် အရူးအမူး တက်ချင်တဲ့ ဘာသာရပ်တခုပါ။ အဲဒါကို တက်ခွင့်ရဖို့ NGO တွေ Semi-NGO (National level) က ထောက်ခံစာတွေကို စုပြီး NUS မှာ ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပလုံပါတယ်။ ဝင်ခွင့် မရပါဘူး။
ဖိုးစိန်သာ အဲဒီ မာစတာဝင်ခွင့်ရမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် သိပ်ပျော်မိပါမယ်။ ဘာဆိုင်လို့ ကြားထဲက ပျော်ရသလဲပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ မြန်မာပြည်အတွက် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ အတွက် တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်တခုကို ဖြည့်သွားနိုင်မယ် လို့ မျှော်လင့်မိလို့ပါ။
Social Work ထဲမှာ လုပ်နေတဲ့သူ အများစုမှာ ဒေါ်လာစား ဆိုတဲ့ မက်လုံးလေးနဲ့ လုပ်နေတဲ့သူတွေ များလာတာကို တွေ့နေရပါမယ်။ အများအကျိုးအတွက် စေတနာထား လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီ လုပ်ငန်းတွေမှာ စနစ်တကျ ဖြစ်ဖို့ လိုသေးတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်ကို ထိထိရောက်ရောက် သင်ယူ တက်မြောက်ထားတဲ့ ဆရာကြီးတွေ မြင်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်နဲ့ အားနဲ့ မမျှတဲ့အတွက် ခါချဉ်ကောင် မာန်ကြီးပြီး တောင်ကြီး ဖြိုဖို့ လုပ်နေရတာမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
Master In Counseling Psychology ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒါကလည်း မြန်မာပြည်အတွက် လိုအပ်ချက် တခုပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ဒါတွေ ဟိုဟာတွေ မကောင်းမှန်း လူငယ်တွေ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် လူငယ်တွေ နားဝင်အောင် လူကြီးတွေ (ကျွန်တော် အပါအဝင်) မပြောတတ်သေးဘူး။ နားဝင်အောင် အပြုအမူတွေ ပြောင်းလဲလာအောင် သိမ်းသွင်း စည်းရုံးနိုင်စွမ်းက အတော်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ Behavior change လုပ်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ အဲဒါလို မလွယ်တဲ့ အလုပ်ကို သေချာ လုပ်နိုင်တာက Counselor တွေပါ။
ကွက်လပ်လေးတွေ ဖြည့်ပေးပါ။ နိုင်သလောက် ကြယ်ငါးလေးတွေ ကောက်ပေးပါ။ ဒီမှာ ရထားတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက ကျွန်တော်တို့ ရွှေနိုင်ငံမှာ တချိန်ချိန် အသုံးချနိုင်မှာပါလို့ အကောင်းဘက်ကနေ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ နေမှ မြန်မာပြည်အတွက် ၁၀၀% အပြည့် လုပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ၁၀၀ မဖြစ်ခင် ၃၀ လေး ဖြစ်လည်း သုညထက်တော့ သာပါတယ်လေ။ အခု မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ တချို့သော ဆရာကြီးတွေက ပြည်ပမှာ အကြာကြီး နေပြီးမှ အဲဒီက အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည် ဝေမျှ အသုံးချနေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ အဓိကတော့ ဘယ်မှာ နေနေပါ။ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တတ်တဲ့ စိတ်လေး ရှိနေရင် မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည် ပေးဆပ်ဖို့ မမေ့ကြပါဘူး ဗျာ။ =)
Social Work ဆိုလို့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တုန်း ပြောပါအုံး။
Social Work ကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာန တခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါက လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနပါ။ အခုတော့ ဘယ်လို ခေါ်လဲ ကျွန်တော် မသိတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဝန်ကြီးဌာနက တကယ်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် နည်းပါးလွန်းပါတယ်။
ညွန်မှုးအဆင့်တွေ ရောက်နေတဲ့ ဆရာ့ ဆရာကြီးတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့တတွေ လုပ်သင့်တာတွေကို သိပေမယ့် မလုပ်နိုင် ရှာသေးပါဘူး။ Social Work က နယ်ပယ် ပိုကျယ်ပါတယ်။ လုပ်စရာတွေ အရမ်းများပါတယ်။ ကိုယ်တဦးတည်းနဲ့ လုပ်လို့ရမယ့် အလုပ်မျိုးထဲမှာ မပါဘူးလို့ ကျွန်တော် မြင်မိတယ်။ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝ အတွေ့အကြုံ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေပေါ် အခြေခံထားတဲ့ ကျွန်တော့် အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက် မှားကောင်း မှားနိုင်ပါတယ်။
Master In Counseling Psychology ကတော့ တနိုင်တပိုင် လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးပါ။ ကိုယ်တယောက်တည်းနဲ့ စ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်အတွက် အချိန် အပြည့် မပေးနိုင်တဲ့ ကာလမှာတောင် မြန်မာပြည် ပြန်တဲ့ အလည်ခဏ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဟောပြောပွဲလေးတွေ၊ ကလေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလေးတွေ၊ ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ အမြင် ဖလှယ်တဲ့ ပွဲလေးတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးကို အမြင် ပြောင်းဖို့ အကျင့် ပြောင်းဖို့ဆိုတာ အရမ်း ခက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နိုင်သလောက်လေးနဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ်နေခဲ့တဲ့ ကျောင်း၊ ကိုယ့် အိမ်နီးနားချင်းက ကလေးတွေကို တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး နှစ်သိမ့် ပညာပေး လမ်းပြနိုင်ရင်ပဲ ရေမျောကမ်းတင်နေတဲ့ ကြယ်ငါးလေး တချို့ ပင်လယ်ပြင်မှာ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ကူးခတ် နိုင်ပြီပေါ့ဗျာ။
ကိုဇူလိုင် ကျေးဇူးလဲတင်တယ်။ အားလဲတက်ရပါတယ်။
Very interesting live. It is leading to the social work. Good job!
တော်ရာမှာ နေရ ဆိုသလိုပေါ့
ဘ၀ဟာ chaotic ပဲ။ လောကဓံဟာလည်း chaotic။ အဲဒါကို စနစ်တကျဖြစ်ချင်နေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့တွေ အပြောင်းအလဲကို နည်းနည်းမသတီသလိုဖြစ်ကြတာနေမယ်။
ကိုဖိုးစိန်လေးရေ.. ဘ၀ဆိုတာတော့ အပြောင်းအလဲ မျိုးစုံကြုံရတာ ဓမ္မတာပါဘဲ။ ကုသိုလ်လဲရ ၀မ်းလဲဝတဲ့ အလုပ်မျိုးလေးကို လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ကုသိုလ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကံကြမ္မာကပေးတဲ့ ကိုယ်နဲ့ အမှန်တကယ် ထိုက်တန်လို့ ရခဲ့တဲ့အလုပ်ဟာ ကိုဖိုးစိန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ တကယ်စိတ်ဝင်စားလို့ လုပ်ချင်တာတောင် အဲဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေကို လုပ်ခွင့်မရခဲ့တဲ့သူတွေ တစ်ပုံကြီးထဲမှာ ကိုဖိုးစိန်က အတော်ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့သူပါ။ ကိုယ်ကုသိုလ်ရဖို့အတွက် ဘုရားပေးတဲ့ အလုပ်လို့သာမှတ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်စမ်းပါကွယ်။